Qaramada Midoobay oo si kulul u cambaareysay weerarkii Jimcihii lagu qaaday Masaajid ku yaalla… | HalQaran.com
Home Wararka Maanta Qaramada Midoobay oo si kulul u cambaareysay weerarkii Jimcihii lagu qaaday Masaajid...
Qaramada Midoobay oo si kulul u cambaareysay weerarkii Jimcihii lagu qaaday Masaajid ku yaalla…
Salmosi (Halqaran.com) – Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay Antnio Goterres ayaa si kulul u cambaareeyay weerar lagu dilay 16 qof oo Jimcihii lagu qaaday masjid ku yaalla magaalada Salmosi ee waqooyiga dalka Burkina Faso.
Xoghayaha ayaa tacsi u diray ehellada ,qoysaska iyo saaxibada dadkii ku geeriyooday weerarkaas .
Waxa uu hoosta ka xarriiqay in Qaramada Midoobay ay diyaar u tahay in Dowladda Burkina Faso ay ka gacansiinayso isku xirnaanta bulshada iyo guud ahaan horumarka dalka.
Fiidnimadii Jimcaha ayay ahayd markii rag ay 16 ruux ku dileen masjid jaamaca Salamosi, halkaas oo laba kalena ay ku dhaawacmeen.
Kooxaha islaamimiyiinta ee xariirka la leh Daacish ayaa boqollaal dad ah ku dilay dalkaas sanadihii la soo dhaafay.
Mid ka mid ah dadka deggan deegaanka uu weerarku ka dhacay ayaa sheegay in shacabka deegaanka ku nool ay cabsi awgeed ka cararayaan agagaarka goobta uu weerarku ka dhacay.
Ma jirto ilaa iyo haatan cid sheegatay masuuliyadda weerarka, hase yeeshee tan iyo sanadkii 2015-ka waxaa dalka Burkina Faso kusii kordhayay weerarrada ceynkan ah oo ay geeysanayaan kooxda Daacish, oo caqabad ku noqday nolosha bulshada dalkaas.
Hay’adda Qaxootiga ee Qaramada Midoobay ayaa sheegtay in in ka badan rubuc milyan oo qof oo reer Burkina Faso ah lagu qasbay inay ka cararaan guryahooda seddexdii bilood ee la soo dhaafay.
Toddobaadkii hore, 20 qof ayaa lagu dilay weerar lagu qaaday goob laga qodo macdanta iyo dahabka oo ku taal waqooyiga dalkaas.
Xoghayaha Guud ee Qaramada Midoobay Antnio Goterres